Saxafi Somali ah oo khatar ugu jira in laga soo masaafuriyo dalka Kanada – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Saxafi Soomaaliyeed oo muddo dheer ka mid ahaa Jaalliyadda Soomaalida ku nool Gobalka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa la sheegay in dalka Kanada laga soo masaafirinayo, laguna soo celinayo dalka Somalia.
Saxafigaasi oo lagu magacaabo Liibaan Diiriye, la Ilyaas Macow ayaa waxa uu sannadkii 1998-dii ka soo tegay dalka Kanada, kadibna waxa uu yimid Gobalka Minnesota, si uu magangelyo uga helo.
Liibaan Diiriye waxa uu ahaa Asaasaha iyo Daabacaha Websaytka Mogadishu Times.
Shabakadda Wararka ee Idaacadda Minneapolis Public Radio ee www.mprnews.org ayaa qortay in Liibaan Dirie uu dhowr jeer hanjabaad ka helay Alshabaab, kadib, markii uu Websaytkiisa Mogadishu Times ku soo bandhigay Video uu Alshabaab ku cambaaraynayo.
Mid ka mid ah Muuqaalladda Video-ga ee uu ku soo bandhigay Websaytkiisa ayaa la sheegay inay daawadeen 160,000 oo qof, inkastoo ay Burcadda Internetka dhowr jeer jabsadeen Wabsaytkiisa.
Dowladda Maraykanka waxay ku gacan-sayrtay codsigiisa magangelyo-doonka sannadkii 2005-tii, kadib, markii la ogaaday Kiis Dacwo ah oo 20-sanno ka hor ku galay gudaha dalka Kanada, isagoo lagu eedeeyey inuu jirdilay xaaskiisii hore oo ay haatan kala tageen oo lagu magacaabo Xamdi Nuur.
Mar Khadka Telefoonka lagula xiriiray Xamdi Nuur iyadoo ku sugan magaalladdfa Toronto, waxay sheegay inuu kiiskaasi dhacay muddo ka badan 20-sanno, isla markaana uusan ahayn shil khatar ahaa.
Waxay intaasi ku dartay inay saygeeda hor ee Liibaan Diiriye saaxiibo yihiin, isla markaana uu saaxiib la yahay gabadhiisa oo haatan 23-jir ah.
Dhinaca kale, Dowladda Kanada ayaa ku wargelisay Liibaan Diiriye oo 47-jir ah inuu yahay Dembiile aan laga jeclayn dalka Kanada, isla markaana si buuxda dib loogu eegayo codsiyaddii uu qortay markii uu Qaxooti ahaanta isaga dhiibay dalka Kanada.
Dowladda Kanada ayaa la filayaa inay maalinta Isniinta go’aan ka gaaraan, kadib, marka Liibaan Diiriye lala yeesho Wareysi kale.
Waxaana suurto-gal ah in Liibaan Diiriye loo soo masaafuriyo dalkiisa hooyo ee Somalia.
Senotor Keith Ellison oo ah Mudane ka tirsan Xisbiga Jambuuriga ee Maraykanka, lagana soo doorto Gobalka Minnesota ayaa ugu baaqay Dowladda Kanada inay sameeyaan wax kasta si lagu gaaro Xeer jajab horseedi karta inaan Saxafigaasi lagu celinin gudaha Somalia, si uusan ugu gacan-gelin Alshabaab, waa sida uu hadalka u dhigay.
Wuxuuna intaasi ku daray inay nolosha Saxafigaasi khatar ku jirto haddii lagu celiyo Somalia.
Sannadkii la soo dhaafay, Liibaan Diiriye waxa uu noqday Bukaan ka jiran Beerka, wuxuuna bilaabay inuu raadiyo si looga daaweeyo cuddurka kaga dhacay Beerka.
Garyaqaano soo bandhigay qorshe lagu sii dayn karo Soomaali ku xiran Maraykanka